Ex Ra'iisal Wasaare Hailemariam oo ka Digay Hanaanka Loo Maraayo Xal U Raadinta Khilaafka Somalia Iyo Imaaraadka
Monday 28th May 2018 12:34:06 in Wararka by Super Admin
Addis Ababa (Gargaar)-Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Ethiopia Hailemariam Desalegn, ayaa ka digay in lasii fogeeyo Khilaaf Siyaasadeedka ka dhexeeya Dowladah Somalia iyo Imaaraadka Carabta.
Hailemariam Desalegn, waxa uu sheegay in Khilaafka laba dowladood uu yahay mid u baahan in lasiiyo wakhti badan, hasee ahaatee aanu ku xalismeynin maalmo kooban.
Khilaafka ayuu sheegay inaanu aheyn mid dhow, waxa uuna cadeeyay inay gacmaha kula jiraan dowlado Siyaasad ahaan khilaafsan labada dal.
Khilaafka ayuu carab dhabay mar uu Hailemariam Desalegn la hadlaayay warbaahinta maxaliga inuu yahay mid salka ku haya faragalin dhan Siyaasadeed iyo mid dhaqaale, sidaa aawgeed ay muhiim tahay in marka hore labada dal ay kawada hadlaan Khilaafkooda.
Dowlada Somalia ayuu sheegay Mr Hailemariam Desalegn inay xaq u leedahay inay difaacato Qaranimadeeda sidaa aawgeed ay ku baaqeyso in fursad lasiiyo Somalia oo Khilaafka xalkiisa ku jiro gacanteeda.
Hailemariam Desalegn, oo aan kusii fogaan arrimaha labada dal, ayaa ku taliyay in Dowladaha xalka u raadinaaya Khilaafka ay ka shaqeeyan sida marka hore leysku horfadhiisin lahaa labada dale e uu Khilaafka ka dhexeeyo ka hor inta aan laga hordhicin.
Sidoo kale, Dowlada Ethiopia ayuu sheegay inay kaalin weyn ka qaadan doonto dadaalka xalka loogu raadinaayo Dowladaha Somalia iyo Imaaraadka Carabta, si buu yiri loosii ambaqaado xiriirka labada dal.
Si kastaba ha ahaatee, Ethiopia oo marti galisay Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somalia Xasan Kheyre, ayaa waxaa marti galintooda kamid ahaa in xal loo raadiyo Khilaafka sii fogaaday, waxaana xusid mudan inay kamid tahay wadamada xalka raadinaaya, hadana qeyb ka ah Heshiiska Dekadda Berbera.